News Mansarovar » कक्षा १२ को नतिजा कहिले ? बोर्डका अध्यक्ष भन्छन्- प्राप्तांक इन्ट्री गर्नै गाह्रो भइरहेको छ कक्षा १२ को नतिजा कहिले ? बोर्डका अध्यक्ष भन्छन्- प्राप्तांक इन्ट्री गर्नै गाह्रो भइरहेको छ – News Mansarovar
कक्षा १२ को नतिजा कहिले ? बोर्डका अध्यक्ष भन्छन्- प्राप्तांक इन्ट्री गर्नै गाह्रो भइरहेको छ
यसअघि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष पौडेलले १५ पुसभित्र नतिजा प्रकाशन गर्ने लक्ष्य रहेको बताएका थिए ।
शिक्षकहरूले उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरेर २२ मंसिरसम्म बोर्डको सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो । बोर्डको प्रदेश र शाखा कार्यालयहरूले ती उत्तरपुस्तिकाको सम्परीक्षण गरेर केन्द्रमा पठाएका थिए ।
केन्द्रमा आएको प्राप्तांकमा कक्षा ११ को प्राप्तांक, आन्तरिक र प्रयोगात्मक परीक्षाको अंकसमेत जोडेर नतिजा सार्वजनिक गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ ।